Uyilo olutsha lwe-3D crystal USB Drive abavelisi besayizi encinci kunye nabathengisi | M-uKumkanikazi
Uyilo olutsha lwe-3D crystal USB Drayivu enobungakanani obucekeceke
Amandla oGcino: Amandla okwenene. Le USB flash drive isisombululo kuzo zonke iimfuno zakho zokubeka.
Ukusebenza kwe-USB 3.0- Isantya esiphezulu sokudluliselwa kwedatha isantya ukuya kuthi ga kwi-80-120MB / s yokufunda kunye ne-15-30MB / s yokubhala. Gcina ixesha elininzi lokuhambisa idatha kunye nokufundwa kweefayile.
Ububanzi bokuhambelana- Iplagi kunye nokudlala. Iyahambelana ne-USB 2.0 kunye nomva. (Awudingi ukufaka nayiphi na isoftware). Inkxaso Win98 / ME / 2000 / XP / Vista / win7 / win8, Mac OS 9.X / Linux2.4 okanye ngaphezulu.
• Amandla oGcino: Amandla okwenene. Le USB flash drive isisombululo kuzo zonke iimfuno zakho zokubeka.
Ukusebenza kwe-USB 3.0- Isantya esiphezulu sokudluliswa kwedatha isantya ukuya kuthi ga kwi-80-120MB / s yokufunda kunye ne-15-30MB / s yokubhala. Gcina ixesha elininzi lokuhambisa idatha kunye nokufundwa kweefayile.
Ukuhambelana okubanzi- Iplagi kunye nokudlala. Iyahambelana ne-USB 2.0 kunye nomva. (Awudingi ukufaka nayiphi na isoftware). Inkxaso Win98 / ME / 2000 / XP / Vista / win7 / win8, Mac OS 9.X / Linux2.4 okanye ngaphezulu.
• Iyaphatheka kwaye ihlala ixesha elide- Incinci, incinci epokothweni ekuthwaleni lula. Sebenzisa i-chip ye-A-class, inokucinywa iphindaphindwe kangangezihlandlo ezili-100,0000. Inkxaso yePlagi eshushu kunye nokudlala. Ukusetyenziswa kwaMandla asezantsi, ukugcinwa kombuso okuqinileyo.
Uyilo lweCrystal kunye neBhokisi entle - Unokwenza njengesipho esihle kubahlobo bakho nakwiintsapho. Ukukhanya emazantsi omzimba wekristale kuya kuhlala luhlaza xa usebenzisa. Indlela entle yokwahlulahlula inyambalala yeedrive drive ukusuka komnye nomnye njengoko i-USB yethu entle isiza ngeendlela ezahlukeneyo kusetyenziso lwemihla ngemihla.
Egqithileyo Uyilo olumiselweyo lwe-16GB / 32GB ye-LED LOGO ye-USB Drayivu
Okulandelayo: Umboniso omtsha weDrive Drayivu
I-M-queen Compact 2000mAh ibhanki yamandla engxamisekileyo
I-MQ-GP01 iMagnetic Dual Charger yePS5 / XSX / Swi ...